महिला कण्डम प्रयोग गर्न किन रुचाउँदैनन् ? जान्नुस् मुख्य कारण - Everest Dainik - News from Nepal
महिला कण्डम प्रयोग गर्न किन रुचाउँदैनन् ? जान्नुस् मुख्य कारण
एजेन्सी । कण्डम भन्ने शब्द सुन्दा धेरैलाई अझैं पनि लाज लाग्छ । प्रायः ग्रामीण भेगमा कण्डमको नाम सुन्न अझैं रुचाउँदैनन् । तर, शहरमा भने यो सामान्य जस्तै बनेको छ । गाउँमा कण्डम लाजको विषय बनि राख्नुको मूल कारण अशिक्षा नै हो ।
रोचक विषय त के छ भने शहरमा प्रायः मानिस शिक्षीत भए पनि कण्डम भने कमैले मात्र प्रयोग गर्ने गरेका तथ्य बेलाबेला सार्वजनिक भइरहेका छन् । अब प्रश्न यो पनि होला, पुरुषले रुचि नराखेर कण्डम प्रयोग गर्ने घटेकी महिलाले ? यो प्रश्नको जवाफ पनि विभिन्न तथ्यहरुले पुष्टि गरेका छन् । तथ्यहरु भन्छन्,- महिलाहरुले रुचि नराख्दा कण्डम प्रयोग गर्नेको संख्या घट्दो छ ! खासमा महिलाहरुले किन कण्डम लगाएर यौन सम्पर्क रुचाउँदैनन् ? यो प्रश्नको जवाफ यस्तो छ-
–कण्डम प्रयोग गरेर यौन सम्पर्क गर्दा कम आनन्द हुन्छ ।
–प्रायः महिलाहरुलाई कण्डमको बास्ना मन पर्दैन । यसकारण पनि उनी कण्डम लगाएर यौन सम्पर्क राख्न रुचि देखाउँदैनन् ।
–एलर्जी हुने डर । यो कारणले पनि महिलाहरु कण्डम प्रयोग गर्न अप्ठयारो मान्छन् ।
–कण्डम फुट्ने डरले पनि अधिकांश महिला प्रयोग गर्न चाँसो देखाउँदैनन् ।
मुख्य यी कारणले नै धेरै जसो महिलाहरु कण्डम प्रयोग गर्न रुचि दिदैनन् । हुनत पुरुषहरु पनि कम छैनन् । उनीहरु पनि कण्डम प्रयोग गरिरहन आवश्यक ठान्दैनन् । यसले गर्दा खतरा हुन्छ । असुरक्षित यौन सम्पर्कले दुवैलाई घाटा पुर्याउँछ । कण्डम प्रयोग नगरेरै याैन सम्पर्क गर्दा रोग लाग्न सक्ने भय त छदैछ बच्चा बस्ने खतरा पनि उत्तिकै हुन्छ । यसकारण यसको महत्व बझेर प्रयोगमा ध्यान दिए राम्रो होला कि ?
याे पनि पढ्नुस कण्डम लगाएर मज्जा नै आउदैन : किशोरकिशोरी
ट्याग्स: condom, lady